छोरीहरुलाई थाइल्याण्ड मै छोडेर नेपाल आइपुगेकी हिमानी के १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्लिन ? (भिडियो हेर्नुहोस) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/छोरीहरुलाई थाइल्याण्ड मै छोडेर नेपाल आइपुगेकी हिमानी के १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्लिन ? (भिडियो हेर्नुहोस)
छोरीहरुलाई थाइल्याण्ड मै छोडेर नेपाल आइपुगेकी हिमानी के १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्लिन ? (भिडियो हेर्नुहोस)
हिमानी शाह स्वदेश फर्किएकी छन्। लकडाउनले गर्दा उनी थाइल्याण्डमा दुई छोरी र छोरासँगै बस्दै आएकी थिइन् ।हिमानीका दुई छोरीहरूलाई थाइल्याण्डमै छाडेर छोरा हृदयेन्द्रलाई लिएर नेपाल आएकी हुन् ।
थाइल्याण्डमा रहेकी हिमानी मंगलबार अपरान्ह ३ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएको विमानस्थलका महाप्रवन्धक देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए।नेपाल एअरलाइन्सको विमानमार्फत् हिमानीसँगै उनका छोरा हृदयेन्द्र पनि स्वदेश फर्किएका हुन्। ‘पिसिआर परीक्षण गरेर आएको भन्ने छ,’ उनले भने ‘यसबारे थप सिसिएमसीले हेर्छ।’
हिमानी स्वदेश फर्किएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रेस सहयोगी फणिराज पाठकले बताए। ‘उहाँहरु स्वदेश आउनुभएको छ, क्वारेन्टिन बस्ने/नबस्ने जानकारी भएन’ उनले भने।तर स्रोतले भने हिमानी क्वारेन्टाइनमा बस्ने बताएको छ ।
केहि लक्षण देखिने हो कि भनेर उनी गुप्तबास नै बस्ने बताइएको छ । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने कुरामा बिवाद चर्किरहँदा हिमानीको नाम पनि जोडिन आइपुगेको छ । उनी पनि भारतकी चेली नै हुन् । भिडियो हेर्नुहोस ::
ऐश्व`र्यले नयाँ फर्निचरहरू किन्न सुझा`व दिँदा राजा बिरेन्द्रले भने, ‘जनताले दुःख गरेर तिरेको करबाट यी फर्नि`चर किनिएका हुन्, पुराना सोफा`का कपडा फेरेर मर`म्मत गरे हुन्छ, नयाँ किन्नु पर्दैन ।’
लकडाउनपछि पशुपति आर्यघाटमा जे देखियो….. !